Olee otú Naghachi ehichapụ iPhone SMS / MMS
Olee otú Naghachi ehichapụ iPhone MMS
iPhone White ihuenyo nke Ọnwụ
Weghachi SMS / MMS si iPhone 6?
Hi. Mgbe m nọ pụọ na honiimuunu, m na-composing MMS na mberede m iPhone ihuenyo wee nwa na restarted ... ekwentị yiri ezi mgbe, ma mgbe m na-enyocha m ozi akụkọ ihe mere eme nile SMS / MMS e ehichapụ. All ọdịnaya ndị ọzọ bụ unaffected. Ọ dị onye maara ihe m kwesịrị ime iji weghachi m naanị SMS / MMS site na iOS 9 iPhone?
Ọ bụrụ na ị synced gị iPhone na iTunes, n'ezie ị nwere ike iweghachi ya si iTunes ndabere, ma ọ na-eweghachi ihe niile. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ iweghachi gị SMS / MMS, i kwesịrị ịdabere iPhone mgbake ngwá ọrụ na-pụrụ inyere gị aka naghachi gị iPhone ọdịnaya site ndabere selectively.
Ọ dịghị mkpa ka ndị dị otú ahụ software ọ bụla ọzọ, dị nnọọ inwe ya ebe a: Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery), ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows). The software ike gị wepụ na naghachi iPhone MMS / SMS n'ime 2 nzọụkwụ, na i nwere ike ihuchalu dum ọdịnaya tupu mgbake. Chọrọ ego nkọwa? Na-agụ na.
Cheta na: Ugbu a, ma Windows na Mac nsụgharị nke software ekwe ka ị kpọmkwem naghachi faịlụ site na iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS enweghị ndabere faịlụ.
Download free ikpe version n'okpuru na wụnye ya na kọmputa gị.
Ọzọ, ka naghachi SMS / MMS si gị iPhone na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. wepụ iTunes ndabere maka ehichapụ iPhone MMS
Mgbe na-agba ọsọ na ngwá ọrụ na kọmputa gị, ị ga-enweta bụ isi window dị ka ndị a. Mkpa ka ị họrọ a mgbake mode mbụ.
Mgbe na-ahọpụta "naputa site na iTunes backuo faịlụ" mode, niile iTunes ndabere faịlụ e amịpụtara na-egosipụta na a ndepụta. Họrọ otu maka gị iPhone na-aga ọzọ site na ịpị "Malite iṅomi" button.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake ehichapụ iPhone MMS si ndabere
Mgbe ịgụ isiokwu nkwado ndabere na mpaghara, dum ọdịnaya e amịpụtara n'ime nkọwa. Ịnwere ike ihuchalu dum ọdịnaya otu otu. N'ihi na SMS / MMS, họrọ "Ozi", ị nwere ike ịhụchalụ niile nkọwa, uncluding photos, video na ọdịyo faịlụ. Akara ndị ị chọrọ wee pịa "Naghachi". I nwere ike ịzọpụta Natara ozi na mpaghara nchekwa na otu Pịa.
Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị iji weghachite ozi Mgbakwụnye si gị iPhone, ị nwere ike họrọ "Ozi Mgbakwụnye" mgbake. O nwere ihe nile Mgbakwụnye si gị ozi.
Ọ bụrụ na ị na-eji a Windows kọmputa, ị pụrụ agbalị Wondershare Dr.Fone maka iOS na-agbake ozi gị na ụfọdụ yiri nzọụkwụ, ma ọ bụ i nwere ike iji ihe omume kpọmkwem iṅomi gị, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS na-agbake data si ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na otu iTunes ndabere.
Olee otú iji weghachi iPhone si iPad ndabere
Top 6 ngwaọrụ nyefee faịlụ site na iPhone ka PC
Olee otú dezie iPhone Playlist Easily na ngwa ngwa
Olee otú Mbido iPhone dị ka Hotspot na Chọta Disappered Hotspot on iPhone
Olee otú Zuru Hichapụ iPhone
Otú nyefee iPhone Ndi ana-akpo ka vCard
> Resource> iPhone> Olee naghachi ehichapụ iPhone MMS